Cunnooyinka detox-ka runti ma shaqeeyaan? | Bezzia
Pau Heidemeyer | 07/04/2021 23:55 | Nafaqeyn, Caafimaadka
Waxaa jira cuntooyin badan oo adduunka nafaqada ah, mid kastaaba waa mid gaar u ah in lagu gaaro himilo kale: miisaan lumis, kordhinta cufnaanta jirka, hagaajinta caafimaadka wadnaha, ama cunto dufan ku yar ama sodium ah.
Dhinaca kale, waxaa jira cuntooyinka detox ee ku raaxeysta dib u eegista wanaagsan. Waxay ku habboon yihiin nadiifinta jirka waxayna u muuqdaan inay leeyihiin taageerayaal badan, oo ay ku jiraan kuwa caan ah.
Kahor bilaabista cuntada, waxaa muhiim ah in laga feejignaado ujeedooyinka aan dooneyno inaan gaarno, xaaladdan oo kale, waa inaan sidoo kale ogaannaa khataraha suurtagalka ah ee ay yeelan karto cuntada aan dooneyno inaan bilowno.
Waxaa jira cuntooyin wasakhda badan, qaar waxaa loo qaabeeyey iyadoo lagu saleynayo cabitaannada, geedaha ama kuwa kale ee sooman, iyo cunidda qaybo yar oo khudaar iyo miro ah, iyo weliba waxyaabo dheeri ah.
Cunto wasakhaysa jirka, waxay kuu oggolaaneysaa inaad raacdo qorshe adag oo miisaankaaga dhaqso loogu dhimo, waxay ka caawisaa nadiifinta jirka kiimikooyinka sunta ah, iyo wixii siyaado ah.
Markaan ka hadlayno sunta sunta ee jirka, waxaan isku dayeynaa inaan jirkeena ka saarno sunta soo uruurtay kadib markii cunida badan ee cuntooyinka warshadaysan iyo dhamaan wasakhda deegaanka ee aan awoodnay inaan dheefshiido.
1 Cunnooyinka detox waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato
1.1 Daraasadaha iyo cuntada detox
1.2 Hordhaca cuntada detox
2 Sidee cuntooyinka sunta ka shaqeeya u shaqeeyaan
3 Fiiro gaar ah u yeelo cuntooyinka detox
4 Cun caafimaad leh cun jirkaaguna wuxuu sameyn doonaa inta kale
Cunnooyinka detox waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato
Waa inaan ogaanno dhibaatooyinka soo raaca ee noocan ah ee cuntada detox ay yeelan karaan. Waa in la xusuusnaado in noocan ah cuntada ay dhiirrigeliso cunista cuntada dabiiciga ah, e ku dar biyo badan iyo khudaar, waxyaabaha caafimaadkaaga u wanaagsan.
Sida cuntooyinka kale ee badan, cuntada detox waxay yeelan karaan waxyeelo waxyeelo leh oo ay tahay inaan ka feejignaano ka hor intaan la adeegsan.
Daraasadaha iyo cuntada detox
Xilligan ma jiraan daraasado badan oo muujinaya waxtarkeeda, maaddaama ay jiraan dad u roon nooca noocan ah maaddaama ay ku doodayaan in sunta aysan had iyo jeer jirka uga bixin si dabiici ah ayna u baahan yihiin kor u qaad si ay u caawiyaan nadiifinta jirka.
Dadkani waxay u kuur galayaan sida sunta ku sii jirto habdhiska dheef-shiidka, caloosha, iyo lugahasidoo kale maqaarka iyo timaha waxayna sababi karaan daal, madax xanuun iyo lallabbo.
Taas bedelkeeda, waxaa jira dad sheeganaya in sunta si dabiici ah loo baabi'iyay mana aha muhiim in la raaco cunno adag si loo gaaro.
Hordhaca cuntada detox
Fikradda aasaasiga ah ee ka dambeysa cuntooyinka sunta dila ayaa ah in la iska daayo noocyo ka mid ah cuntooyinka laga yaabo inay ku jiraan sunta xilli ciyaareed. Fikradda ayaa ah in la nadiifiyo oo jirka laga nadiifiyo wax kasta oo "xun" ah. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay in jirka bini'aadamka loogu talagalay qaabkiisa sunta sunta.
Sidee cuntooyinka sunta ka shaqeeya u shaqeeyaan
Sidii aan soo sheegnay, ma jiraan oo keliya hal cuno oo detox ah, way ku kala duwan yihiin iyaga dhexdooda badankooduna waxay u baahan yihiin xilli xilli soon ah, taas oo ah, Jooji cunnada dhowr maalmood ka dibna si tartiib tartiib ah wax u baro iyo tartiib tartiib ah noocyada qaarkood ee cuntooyinka ku jira cuntada.
Cunnooyin badan oo nuucaan ah ayaa soo jeedinaya in la sameeyo waraab xiidmaha leh ama enema si "loo nadiifiyo" xiidanka. Cunnooyinka kale waxay kugula talinayaan qaadashada kaabis ama noocyo gaar ah oo shaah ah si ay uga caawiso habka isdaahirinta jirka.
Cunnooyinka detox-ka ayaa ka hortagi kara oo xitaa daaweyn kara cudurrada si dadka ay u siiyaan tamar badan ama diirad saarid. Jirka oo laga dhergo cunnooyinka "sunta ah" ayaa naga dhigi doona daal, gaabis iyo madax-xanuun.
Waa muhiim in la helo cunno dufan ku yar oo faybarku ku badan yahay, sidaas awgeedna la ilaaliyo cunno caafimaad leh oo la siiyo kuwa raaca tamar badan.
Si kastaba ha noqotee, sidaan horay u saadaalinay, caddeyn cilmiyeed ayaa ka maqan in cuntooyinkan ay ka caawiyaan jirka inuu baabi’iyo sunta dhaqso ama ciribtirka sunta, inkasta oo aysan waligood xanuunayn in la raaco cunto u oggolaanaysa jirka inuu nasto.
Fiiro gaar ah u yeelo cuntooyinka detox
Dad badan ayaa aamminsan in haddii ay cunaan waxyaabaha detox-ka ay luminayaan culeysyo badan, hase yeeshe, gebi ahaan run maahan oo tilmaamaha qaarkood waa in la tixgeliyaa si aan qatar loo gelin, Maaddaama haddii cuntooyin aad u adag la fuliyo, kuwani waxay qaadan karaan khasaarahooda.
Cunnooyinka detox ma ku habboon yihiin dadka qaba cudurrada qaarkood. Dareenkan, laguma talinayo dadka qaba sonkorowga, cudurka wadnaha iyo xaaladaha caafimaad ee kale ee daba dheeraada. Haddii aad uur leedahay ama dhibaato ka haysato cunista, waa inaad ka fogaataa noocyada noocan ah.
Cunnooyinka detox waxay noqon karaan kuwo balwad leh. Tani waa sababta oo ah cunno la'aanta ama maamulka enema waxay abuureysaa dareen ka duwan oo laga yaabo inay dad badani jecel yihiin. Dadka qaarkiis, kicinta la midka ah tan lagu dareemo nikotiinka ama aalkolada waxay u egtahay in la dareemo.
Cuntada dheeriga ah ee jirka lagu nadiifiyo waxay yeelan kartaa waxyeelo. Waxyaabo badan oo dheeri ah oo la isticmaalay xilliyadan cuntooyinka sunta sunta ah ayaa dhab ahaan calool jilciyeyaal ah, taas oo keeneysa in dadka qaba "jaamku" ay aad u badan musqusha u tagaan. Tani waxay yeelan kartaa saameyn caafimaad oo daran, maadaama maadooyinka caloosha jilciya ee dawooyinka ah ay sababi karaan fuuqbax, isu dheelitir la’aanta macdanta iyo sidoo kale dhibaatooyinka nidaamka dheefshiidka.
Cunnooyinka detox waxaa loogu talagalay in lagu gaaro yoolalka muddada-gaaban qaarkood. Waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo kale, soonka muddada dheer wuxuu hoos u dhigi karaa dheef-shiid kiimikaadka qofka. Tani waxay fududeyneysaa dib u soo celinta miisaanka lumay iyo dhib badan in lumiyo miisaan badan mustaqbalka.
Cun caafimaad leh cun jirkaaguna wuxuu sameyn doonaa inta kale
Cunista miraha iyo khudradda badan ayaa aasaas u ah qaab nololeed caafimaad qaba. Waa inaadan iloobin inaad qaadato, miraha xilliyeed, khudaarta iyo fiilooyinka, iyo waliba cabitaanka biyo badan. Laakiin sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ka hesho dhammaan nafaqooyinka aad uga baahan tahay cuntooyinka kale.
Barootiinnada waa inaysan iyana ka maqnayn, sidoo kale fiitamiinno ama macdano ay tahay in laga helo ilo kala duwan. Waxa ugu muhiimsan ee cuntada caafimaadka leh waa noocyo badan mana badna, maxaa yeelay si kasta oo ay cunno u caafimaad qabto, haddii si xad dhaaf ah loo qaato, waxay inagu keeni kartaa dhaawac intaas ka sii badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Nafaqeyn » Cunnooyinka detox-ka runti ma shaqeeyaan?
Uterqüe waxay soo bandhigaysaa A la Fresca, oo ah gurigeeda cusub ee daabacaada SS21